Blockchain ngo DFINITY Stiftung ewelite $ 61M - Blockchain News
Blockchain ngo DFINITY Stiftung ewelite $ 61M
A na-abụghị uru nzukọ nke chọrọ ịzụlite a ọzọ decentralized internet iji blockchain welitere $61 nde ke ego site n'aka U.S. ịmalite isi obodo ike Andreessen Horowitz na oke ego Polychain Capital, ya kwuru na Wednesday.
DFINITY Stiftung chọrọ ike ihe ha kpọrọ ihe "internet kọmputa,"Ihe na-emeghe na netwọk na-eje ozi dị ka a nnukwu virtual mainframe kọmputa na cyberspace. Nke ahụ ga-ekwe decentralized nsụgharị nke ọtụtụ online technology ọrụ ndị dị ka über, Dropbox, na eBay, dị ka a ụlọ ọrụ na nkwupụta.
Ryan Zurrer, ịmalite onye nke Polychain Capital, akpọ technology ihe "oké mkpa ọhụrụ" si ya ụlọ ọrụ "na-eme anyị kasị-ebi isi obodo atụ."
"Ugbu a, anyị na-achọ nnọọ ike na otú hụkwuo nkesa,"Kwuru DFINITY onyeisi oche na ndị isi ọkà mmụta sayensị Dominic Williams. "Anyị na-na na ina ke ọtụtụ narị nde chọrọ isonye na oru ngo."
Chainalysis - ụlọ ọrụ na-ebibi ndị anonymity Bitcoin
Na ọtụtụ ndị mepere emepe co ...
Ugboro abụọ ọnụọgụ weere ekpochapụ kaadị Asset Market
The cryptocurrency m ...
Ọtụtụ ijeri dollar Wall Street ụlọ ọrụ malitere erekwa na Bitcoin afọ ikpeazụ
Jane Street, a secre ...
Previous Post:Olee otú iwu ahụ a machibidoro kaadị mgbasa ozi na Facebook ga-enyere ụlọ ọrụ
Next Post:Olee otú ike kaadị Exchange
Ka 11, 2018 na 6:28 AM